WEGHAARA FAỊLỤ NDỊ A GBARA AKWỤKWỌ NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
Akwụkwọ a machibidoro 1.0.26
Fichie a machibidoro iwu bụ obere usoro iji zọpụta faịlụ na nchekwa niile na ngwa ngwa iji IDEA, ihe nkesa nke mba ụwa algorithm dabeere na ịme arụmọrụ mgbakọ na okwu na ogologo nke 16 ibe.
Ụkpụrụ nke ngwa a dị mfe: iji zoo ezo, ị ga-ahọrọ akwụkwọ ma ọ bụ folda wee bipụta okwuntughe, na iji kọwaa ya, tinye ya mgbe ị mepee faịlụ ahụ. Maka ntụkwasị obi dị ukwuu, enwere ike iwepụ isi iyi ahụ site n'ịlele igbe nlele kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na i jiri okpukpu abụọ pịa faịlụ nke usoro ahụ mepụtara, a na-akpali gị ịbanye paswọọdụ, mgbe nke ahụ gasịrị, a kwalitero ngwa ahụ nke ejikọtara ihe gbasara akwụkwọ ahụ.
Otu n'ime ọrụ nke usoro ihe omume ahụ bụ nhichapụ faịlụ na akwụkwọ ndekọ na-enweghị ohere nke mgbake, ya bụ, enwere nchịkọta nke data n'onwe ya na ohere efu.
Fichụ a machibidoro iwu nyere gị aka ịdebanye mgbatị nke akwụkwọ edemede (aha) ka i wee nwee ike ijikwa faịlụ ezoro ezo na pịa ọnụọgụ abụọ, n'enweghị ịhọrọ ngwa oge ọ bụla. A ga-etinye faịlụ nke mmemme ahụ na folda dị iche na diski ike ma nọgide n'ebe ahụ.
Akụrụngwa na-enye gị ohere igbakwunye na menu ndokwa "Explorer" isi "Encrypt / decrypt file" iji zoo ezo n'ebughị ụzọ nweta window.
Ọ dị mfe iji usoro;
Enweghị ntọala na ọrụ ndị na - enweghị mkpa - ntinye ya na - apụta na ọnụọgụ abụọ;
Izuga nke faịlụ;
Ihe omume ahụ bụ n'efu.
A na-ekenye mgbatị ahụ na faịlụ ezoro ezo, nke na-egosi na a na-eji ngwá ọrụ ezoro ezo.
Akwụkwọ a machibidoro iwu - usoro mmemme na, na obere nha, na-arụ ọrụ ya nke ọma. Ihe mgbakwunye bara uru - ihichapu faịlụ n'enweghị ohere nke mgbake na-eme ka ọ bụrụ ngwá ọrụ dị mfe iji mụbaa nchedo kọmputa.
RCF Encoder / DeCoder Crypt4free Esi meghee xls faịlụ online Mmemme iji encrypt nchekwa na faịlụ
Fichie a machibidoro iwu bụ obere usoro iji zie ngwa ngwa na akwụkwọ ntuziaka ngwa ngwa. Ọ nwere ọrụ nke iwepụ data kpam kpam site na draịva kọmputa.
Onye Mmepụta :gburuenko Artem